Orinasa paosy taratasy any China Beyin fonosana
kitapo kafe sy dite
kitapo misy voankazo maina
kitapo sakafo biby
kitapo sakafo alika
kitapo fako saka
Kitapo biby hafa
Kitapo voa hafa
famerenam-bava sy kitapo mangatsiaka
Kitapo sakafo hafa
Kitapo Sachet rongony
Kitapo miarina rongony
kitapo fanoherana zaza
vonona ny handefa kitapo
kitapo taratasy fisaka
mitsangana kitapo taratasy
kitapo taratasy gusset lafiny
kitapo ambany taratasy
kitapo spout ivelany
Kitapo azo ovaina
Kitapo saosy namboarina ...
Kitapo ahitra sakao namboarina ...
Ahoana ny fampiasana ny horonantsariko horonan-tsary pac ...
Vonona ny handefa ny habe rehetra ...
Namboarina manokana reseala ...
Kitapo taratasy varimbazaha gusset ambongadiny
Ny kitapo gusset amin'ny lafiny iray dia karazana fonosana malemy paosy izay aforitra amin'ny lafiny anatiny amin'ny kitapo ny lafiny roa amin'ny kitapo fisaka mahazatra, ary manao fanokafana boribory boribory lavalava lasa fisokafana mahitsizoro, ary satria aorian'ny aforitra, ny sisin'ny kitapo dia toy ny tuyere ravina, fa mikatona izy ireo. , Ka ny kitapo dia antsoina hoe kitapo taova, ary koa satria toy ny ondana rehefa mameno ny vokatra, ka antsoin'ny olona hoe kitapo ondana.
Mpamatsy kitapo ambany ambany China
Ny taratasy kraft dia vita amin'ny pulp kraft, mazàna dia volontsôkôlà, fanosotra na loko fotsy. Izy io dia malefaka sy matanjaka, manana fanoherana avo lenta, mahazaka fihenjanana sy tsindry lehibe kokoa, fitaovana tsara ho an'ny fonosana. Ankoatr'izay, satria ny taratasy kraft dia sariaka amin'ny tontolo iainana sy azo averina madiodio, ary tsara tarehy, izao dia nalaza sy nalaza be izy.
OEM mijoro kitapo hidin-zip zip miaraka am-baravarankely
Kitapo fonosana malefaka misy rafitra fanohanana marindrano eo amin'ny farany ambany, afaka miarina eo amin'ny talantalana tsy misy tohana, na manokatra ilay kitapo na tsia. Ny ambany dia manana lamosina miverina ary misy sisiny famehezana roa, ny iray eo ankavia ary ny iray eo ankavanana, ary afaka mijoro irery izy rehefa avy nivelatra ilay ambany.
Kitapo mijoro dia iray amin'ireo endrika fonosana malaza indrindra, miaraka amin'ny fisehon'ny talantalana tena tsara. Ho fanampin'izay, mba hahafeno ny filan'ny mpanjifa tsirairay, ny kitapo mijoro dia afaka manampy singa mpamolavola ihany koa, toy ny tahony, ny soritra miolaka, ny zipera azo averina, sns, izay manatsara ny hetahetan'ny mpanjifa hividy.
Kitapo taratasy fisaka vita pirinty
Kitapo fisaka, antsoina koa hoe kitapo tombo-kase telo, satria nanisy tombo-kase ny lafiny telo, ary varavarana iray ihany no navelan'ny mpampiasa hametraka ireo vokatra. Ny kitapo fisaka no karazany matetika sy tsotra indrindra. Ny fahamafisan'ny rivotra amin'ny kitapo fonosana fisaka no tsara indrindra, ary io ihany no karazana azo ampiasaina ho kitapo banga.
Telefaona ： +86 312-6770499
Mailaka ： mialee@foodpackingbag.com
Adiresy ： 310 Room, Liangjiayingzi 2-59, Nanshao Street, Kazuo, Chaoyang, Liaoning, Sina